"साना राजकुमार" Exupery देखि उद्धरण। उत्पादन को विश्लेषण 'साना राजकुमार'
"साना राजकुमार" Exupery इस्पात पखेटा वाक्यांश देखि उद्धरण। तिनीहरूले पनि प्रसिद्ध फ्रान्सेली चालक पुस्तक पढ्न नगर्ने ती परिचित छन्। तिनीहरूले अक्सर तिनीहरूले हितोपदेश वा वचनहरू हुन् भनेर विचार, उच्चारण छन्। तर वर्ण को allegorical काम शब्दहरू मा यो संसारमा विभिन्न आँखा हेर्न मदत गर्छ भनेर एक सत्य समावेश छ।
दर्शन बुद्धिमानी वचनहरू को 1943 मा यस्तो लेखे जो सेन्ट-Exupery एक दार्शनिक उपन्यास छ। प्रतीक भनेर निष्कपटता, शुद्धता र प्रेम वर्ण - साना राजकुमार, monologues आधुनिक संस्कृति को भाग भएका छन् जो बाट उद्धरण।
सुग्घर आफ्नो ग्रह
शानदार शो राजकुमार Antuan Ekzyuperi संग भेट्ने नायक को कहानी मा। "साना राजकुमार", जो देखि कोटेशन दार्शनिक वचनहरू हुन् - छोराछोरीको र मूर्खता वयस्क को बुद्धि बारे एक पुस्तक। आफ्नो विमान को दुर्घटना पछि पाइलट भेट गर्ने यो अनौठो केटा के हो? यस हात्ती, गुलाब, पाठाहरू र Baobab आफ्नो अनौठो कुरा को अर्थ के हो? सायद रहस्यमय राजकुमार संग नायक को बैठक - लेखक आफ्नै बाल्यकाल को फिर्ती छ ...
"Baobabs खबरदार!" - केटा बताए। र यी शब्दहरू मूर्खता सुझावको र जो आफ्नो त्रुटिहरू मा रहन गर्दा, बढ्छ र छिमेकी सबैलाई हत्या कि दुष्ट देख्न गर्छ वयस्क समावेश गर्यो। baobab बीउ पहिलो नजर, माइक्रो-दुष्ट मा innocuous कहानी मा प्रतीक।
शक्ति पहिलो व्यावहारिक हुनुपर्छ
साना राजकुमार एक सानो ग्रह मा बस्थे। तर उहाँले यात्रा गर्न मन परायो। अर्कोतर्फ, यो नै सानो ग्रह, उहाँले गर्ने कुनै बिषय थियो र कुनै एक उहाँलाई निर्देशन दिन्छु सम्राट, भेटे। तर, सबै कुरा को बाबजुद, स्थानीय राजाले आफ्नो पक्का थियो निरपेक्ष शक्ति।
आफ्नो वर्ण ठूलो मानव गल्ती र त्रुटिहरू Antoine डे सेन्ट-Exupery द्वारा वर्णन को मद्दतले। "साना राजकुमार", नियम को रूप मा, अनौठो केटा को वचनहरू हुन् जो देखि उद्धरण, नदेखिने ग्रह को एक निवासी, यो भयो मलाई लाग्छ गरे भनेर एक पुस्तक के आफ्नो जीवन महत्त्वपूर्ण कुरा, तिनीहरूले के बाँच्न बारेमा संसारभरिका वयस्क को र के माध्यमिक छ।
प्रशंसा तर सबै गर्न घमन्डी बहिरा
दोस्रो ग्रहमा व्यर्थमा मानिस बस्थे। "वयस्क - अनौठो मान्छे," - को घमन्डी मानिस संग बैठक पछि राजकुमार लाग्यो। यो मानिस प्रशंसा र accolades तर केही चाहन्थे।
आधुनिक समाज को सबै भन्दा साधारण भरिएको पुस्तक Antuan Ekzyuperi मा चित्रण। जो बाट वचनहरू उद्धरण साना राजकुमार, बुद्धिमानी क्याच वाक्यांश भएका छन्, यो वर्ष अधिक मान्छे र थप र आफ्नो illusions थप जोडतोडले सरल कुराहरू बुझ्न सक्ने क्षमता हराउछ कि विचार embodies।
वयस्क - अचम्मको मान्छे
साना राजकुमार ग्रह Drunkards भ्रमण गरेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण मानिस कि आरी बाहेक केहि थिएन। को भूगोल गर्न - र उहाँले किनभने एक lamplighter, र त्यसपछि, उहाँले यो धूमिल ग्रह राजकुमार धेरै व्यस्त व्यक्ति भ्रमण गर्न गए भ्रमण गरेपछि ... लज्जित थियो पिए। तर यी मानिसहरू को कुनै पनि, र खुसी थियो। र त्यसपछि नायक Exupéry ग्रह पृथ्वी भ्रमण गर्ने निर्णय गरे। आखिर, यो धेरै ठूलो छ र एक राम्रो प्रतिष्ठा छ।
तपाईं tamed गर्नेहरूका लागि जिम्मेवार छन्
छैन "साना राजकुमार" बाट प्रसिद्ध उद्धरण सबै Exupery वचनहरू यात्री दार्शनिक हुन्। धरती मा, नायक फक्स भेटे। उहाँले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गोप्य खोज।
मानिस सधैं जसलाई उहाँले tamed छ एक लागि जिम्मेवार छ। मानिसहरू यो सरल सत्य भूल गरेका छन्। तिनीहरूले सामान्यतया जो कोहीले रत्तीएको गर्न खोज्नु छैन। यसबाहेक, तिनीहरूले केही बुझ्न र अन्वेषण गर्न, र तयार बनाएको कुरा किन्न रुचि प्रयास समय खर्च नगर्नुहोस्। तर समस्या त्यहाँ यस्तो कुनै स्टोर, मित्रता वा प्रेम बेचिएको थियो जो छ।
जहाँ हामी छैनन् त्यहाँ राम्रो
"साना राजकुमार" Exupery मान्छे आज उच्चारण देखि उद्धरण यी शब्दहरू अचाक्ली अर्थ थाहा खोजिरहेका बिना।
राजकुमार यात्रु क्रमबद्ध, पृथ्वी switchman मा भेटे। हतारमा मान्छे रेल मा प्राप्त गर्न, तर तिनीहरूले लेट थिए किनभने छैन। हतार र व्यर्थ आफ्नो जीवन को अभिन्न भाग भएका छन्। बित्तिकै रेल गाडीको बच्चाहरु विन्डो विरुद्ध झुकाव र भागिरहेका परिदृश्य हेर्नुभयो रूपमा। किनभने मात्र तिनीहरूले के चाहनुहुन्छ थाहा छ।
प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो तारा छ
"साना राजकुमार" Exupery देखि उद्धरण यस्तो प्रेम, मित्रता, वफादारी रूपमा अवधारणाहरु संग सम्बन्धित। स्यालले केटा अन्वेषण पछि सरल मानव स्नेह के हो बुझ्न थाल्छ। र प्रेम र मित्रताको सार बुझ्दा उहाँले साँचो मानव बन्दछ। यो एक वर्ष लाग्छ, र साना राजकुमार ग्रह पृथ्वी छोड्न छ। अर्थात्, त्यो मर्न पर्छ - यो अब यो सिर्फ आफ्नो शरीरलाई छोडेर बनाउन सक्छ।
संसारको सौन्दर्य हृदय को खालीपनको यदि आकलन गर्न असम्भव छ। "प्रमुख आँखा देख्न सक्छन्," - फक्स राजकुमार बताए। र सायद यो फ्रान्सेली लेखक को दार्शनिक कार्यहरूमा प्रमुख वाक्यांश छ। धरती मा राजकुमार भनेर आफ्नो ग्रह मा बसे जो गुलाब, discovers पछि, छैन आफ्नो तरिका को मात्र छ। यस्तो यो अर्थ हजारौं छ रूपमा। तर साना राजकुमार मात्र एक, उहाँले tamed थियो एक आवश्यक छ।
"Obelisk": एक सारांश। Vasil Bykov, "Obelisk"
को कमेडी मा शिक्षा को समस्या "को माइनर" D.I.Fonvizina
के वाक्यांश को अर्थ "म प्राणी कांप छु वा सही छ?" छ
कविता को विश्लेषण "सुनको निकुन्ज" Esenina
मेरिना Konyashkin - Filmography, जीवनी र निजी जीवन (फोटो)
मानिस कसरी हेरफेर गर्नुहुन्छ?
Andrey Usachev - छोराछोरीको लेखक, कवि र novelist
आफ्नो हात संग छत गर्न डुब्नु गर्छन्
खिडकियां Windows। सुविधाहरू, डिजाइन, आकार,
विला टेस्ट3- होटल अर्थव्यवस्था
इन्सुलेशन लुगा - izosoft: तापमान नियन्त्रण
जल ब्लास्टर्स नर्फ - एक महान उपहार
कसरी लुट्ने को छुटकारा गर्न? डाक्टर भन्नेछु!